Nwoke a boro ebubo na ọ mejọrọ mpụ mgbe ọ rịgosịrị ihe ngosi agụ owuru snow na Cleveland Metroparks Zoo
site na nhazi na 20-07-06
CLEVELAND - Otu nwoke na-eche ihu ebubo mgbe ọ rịgosịrị ihe ngosi Asia Highland na Cleveland Metroparks Zoo na Sọnde. Ebe a na-ebi agụ owuru agụmakwụkwọ zoo. “Ihe dị ka elekere 1:45 nke abalị ụnyaahụ, ụmụ nwoke banyere mpaghara na-akwadoghị site na ịrịgo akụkụ nke mpụga nke Clevelan ...
Nchoputa okike-Igwe-enyi nke igwe anaghị agba nchara eriri eriri maka zoo
site na nhazi na 20-04-06
Chezọ uzo ochie iji wuo ulo zoo, ebe anakpokota umu anumanu n’ime ulo. Igwe eji eriri igwe anaghị agba nchara maka zoo dị mepere usoro ohuru nke igwe nchara na-eme ka ụmụ Enwe na lemurs nyochaa gburugburu ha - na ndị ọbịa nke mmadụ ịbịaru nso ...
Morden Design Element-Gepair® Igwe anaghị agba nchara Balustrade Infill Mesh
Oghere ndị ọzọ, mmetụta ndị ọzọ, nchekwa karịa: Gepair cable igwe anaghị agba nchara nchara maka steepụ, nwughari balustrade, ebe obibi ma ọ bụ ụlọ azụmaahịa, na-enye nchebe yana ịbụ ihe eji eme ya. Igwe anaghị agba nchara balustrade infill na-eme abụghị nanị na ọ gabigara oke ...
Nabata na Weebụ Ọhụrụ anyị!
Ngwunye mgbidi ahụ na-elekwasịkarị anya na ihe eji arụ ọrụ na ntanetị na-agbanwe agbanwe, nke nwere afọ 20 n'ọhịa a. Ezigbo igwe anaghị agba nchara eriri eriri, eriri igwe eriri igwe, ụdị nke aka aka mere nke eji eme ya n'ọtụtụ zoo mesh, nnụnụ nnụnụ, steepụ, akwụkwọ ndụaja inox royst syst ...